Michal Keating oo bogaadiyay howlaha gudiga qaban qaabada doorashada madaxweynaha – Balcad.com Teyteyleey
Michal Keating oo bogaadiyay howlaha gudiga qaban qaabada doorashada madaxweynaha
Ergeyga gaarka ah ee QM ee Soomaaliya Michal Keating ayaa bogaadiyay howllaha ay hayaan guddiyada doorashada isaga oo ka digay musuq The best prices for lithium are gathered at our store and if you want to take advantage of our deals, as we offer it for only 0.36 USD! maasuqa doorashada.
Michal Keating ayaa soo dhoweeyay shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada oo uu sheegay in ilaa iyo hadda ay qabteen howl muhiim ah iyo sida ay uga go’antahay guddiyada in doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda, waxaa kale uu soo dhowey in lacagaha laga qaado musharaxiinta %50 loogu deeqayo Abaaraha.
Isaga oo ka hadlayay walaaca laga qabo suurtagalnimada musuq maasuq ka dhasha doorashada ayaa waxa uu sheegay in uu rajeynayo in doorashada ay u dhacdo si wanaagsan.
“waa muhiim in musharaxiinta ay ilaaliyaan nidaamka Beesha Caalamka faragalin kuma sameyneyso doorashada mana dhexdhexaadinayaan hase ahaatee, haddii ay dhacdo in Madaxweyne lagu doorto musuq maasuq, waxa aanu sameyn karno waa in aanu la shaqeyn Madaxweynahaas, waxaase intaasi oo dhan ka muhiimsan sida ay Soomaalida u arkaan doorashada” ayuu yiri Mr Keating.
Wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga oo Turkiga ku booqday ciidamo la tababbarayo
IOC president felicitates Somali NOC boss for retaining office.